Linq: Onye na - enye gi ezigbo nkwukọrịta okwu (NFC) Ngwaahịa Kaadị Ahịa | Martech Zone
Ọ bụrụ na ị bụ onye na -agụ saịtị m ogologo oge, ị maara na enwere m obi anụrị ị nweta ụdị kaadị azụmahịa dị iche iche. Enweela m akwụkwọ ndetu, akwụkwọ mpịakọta, kaadị ọla, kaadị mkpuchi… na-atọ m ụtọ nke ukwuu. N'ezie, site na mkpọchi mkpọchi na enweghị ike ịga njem, enweghị nnukwu mkpa maka kaadị azụmahịa. Ugbu a njem ahụ na -emepe, agbanyeghị, ekpebiri m na ọ bụ oge imelite kaadị m wee nweta ụfọdụ n'usoro.
Otu ihe m na-atụkarị ụjọ bụ kaadị azụmaahịa ole ịzụrụ na mmadụ ole ga - eweta na mmemme ọ bụla. Ruo mgbe m mere na Njikọ. Linq nwere ahịrị pụrụ iche nke ngwaahịa kaadị azụmaahịa dijitalụ agbakwunyere NFC. Ọ bụrụ na ị na -eso m nwa oge, ị ga -ama na m nwalere kaadị NFC n'oge gara aga mana ọ nweghị isi. Companylọ ọrụ ahụ nwere ọtụtụ mbipụta na -ebipụta ha wee bụrụ ebe URL na -aga erughị ihe pụrụ iche.
Linq dị iche, na-etinye ngwa mkpanaka iji wuo peeji nke ọdịda (ma ọ bụ akwụ ụgwọ peeji nke nwere nkwalite dị mma) yana ọtụtụ ngwaọrụ ị nwere ike ịzụta nke etinyere NFC. Ibe ịbata nwere ike inwe njikọ profaịlụ mmekọrịta gị, njikọ ịkwụ ụgwọ (Venmo, PayPal, ma ọ bụ CashApp), ma nyere onye ọbịa gị aka ibudata kaadị kọntaktị gị iji tinye gị na kọntaktị ha.
Na Linq Pro, ndenye aha ha na ngwaahịa ha, ị nwekwara ike:
Debe ibe ọ bụla ịchọrọ n'ime itu ukwu nhọrọ.
Tinye mgbakwunye ọdịnaya na ibe ọdịda Linq gị. M gbakwunyere vidiyo YouTube mana ị nwekwara ike ịgbakwunye njikọ nzuko, Spotify ma ọ bụ ihe ọkpụkpọ Soundcloud.
Tinye otu ụdị na ibe gị iji jide ozi ndị ọzọ.
Site na kaadi nke mbu ha na ufodu nhazi, enwere m ike wuo omenala kaadị azụmahịa ya na akara m dị na ya (foto dị n'elu) na m nwere ike ịrapagidesi ike na ekwentị m wee pụọ mgbe ọ bụla onye ọ bụla rịọrọ ma ọ bụ nye m kaadị m. Kama inye onye ọ bụla kaadị azụmahịa, enwere m ike ịpị ya na ekwentị ha ma ọ bụ ha nwere ike nyochaa koodu QR n'azụ ma ewebata ozi m na ozi nbudata ha na njikọ nbudata kọntaktị ibubata m. ozi ịkpọtụrụ ozugbo na ekwentị ha!
Douglas KarrPeeji nke ọdịda na Linq
NFC agbakwunyere Ngwaahịa Digital Card
Linq enyeghị kaadị adịchaghị nke m zụtara, n'ezie ha nwere nnukwu nhọrọ ngwaahịa ịhọrọ site na:
Linq Kaadị - usoro nhọrọ maka kaadị eji otu ebe ị nwere ike ime ka ha doo anya, depụta akara ngosi gị na ha, ma ọ bụ nwee ụdị omenala niile.
Linq mgbaaka - mgbaaka dị mfe nke agbakwunyere NFC… naanị jiri ekwentị gị pịa mgbaaka ahụ wee mepee ebe njedebe.
Njikọ Linq maka Apple Watch - otu egwu Apple Watch nke NFC agbakwunyere… were were ekwentị gị pịa band ahụ wee mepee ebe njedebe.
Njikọ njikọ - A desktọọpụ ma ọ bụ countertop ehiwe na-NFC nyeere na nwere a QR code na ya maka folks eleta gị oche ma ọ bụ ụlọ ndò.
Njikọ Mgbata - A obere NFC bọtịnụ na ị nwere ike arapara na azụ nke ekwentị gị ma ọ bụ ekwentị ikpe. A nwekwara ike ịhazi koodu QR ma ọ bụ akara ngosi gị.
Linq maka Otu
Linq maka ndị otu na-enyere gị aka ịchụso ọrụ mmekọrịta gị na otu ha na-ekesa ndị ọzọ ozi kọntaktị ha.
Linq maka Ihe Omume
Ọ bụrụ na ị na -eme mmemme mmekọrịta, Linq na -enye baajị na oghere maka ndị bịaranụ na ndị na -ere ahịa. Ị nwere ike soro njikọ na njikọ aka n'etiti ndị bịaranụ, ndị nkwado na ndị na -ere ahịa!
Chọpụta ihe gbasara ngwaahịa na onyinye Linq na ụlọ ahịa ha dị n'ịntanetị:
Ngosipụta: edebanyere m aha dị ka onye nnọchi anya Linq na m na -eji njikọ njikọta m na akụkọ a.
Tags: androidkaadị azụmahịangwa egokaadị kọntaktịkọntaktị faịlụozi kọntaktịiPhone iOSzoolinqnjikọ pronfcnfc apụl bandNFL mgbaakakaadị azụmahịa nfckaadị azụmahịa nfcnfc bọtịnụanụ ọhịa